SPARK, kaadị akwụmụgwọ MasterCAD adịghị akwụ ụgwọ ụlọ akụ, rutere Spain | ECommerce ozi ọma
SPARK, kaadị akwụmụgwọ MasterCard adịghị akwụ ụgwọ ụlọ akụ, rutere Spain
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, eCommerce, Ụzọ ịkwụ ụgwọ
O mechara rute Spain Ebua, kaadị akụ nke a MasterCard na ị chọghị njikọ na akaụntụ akụ. SPARK na-eche ndị chọrọ zụta ihe na ntanetị n'ịntanetị, ndị nwere nsogbu ịnweta kaadị akụ, ndị chọrọ ịkọrọ ndị ezinụlọ na ndị enyi ego ma ọ bụ ndị chọrọ iji ya kwụọ ụgwọ maka njem ma ọ bụ nọrọ mba ọzọ.
Ma arụmọrụ nke kaadị a ka ukwuu, ebe ọ bụ na kaadị a abụghị naanị na-akwụ ụgwọ, kamakwa ọ na-enye ohere zipu ma nata ego na-enweghị njikọ na akaụntụ akụ ma enweghị akwụkwọ ọ bụla iji zụta kaadị.
Kaadị SPARK na-enye ohere cịzụ ahịa n'ịntanetị n'enweghị nsogbu, soro ndị ezinụlọ na ndị enyi kerịta ego, jikwaa ma jikwaa mmefu onwe gị na nke ụlọ ọrụ gị, yana ụzọ ịkwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ maka njem. Otu n'ime uru nke kaadị SPARK bụ na enwere ike igbochi ya ma ọ bụrụ na izuru ohi ma ọ bụ ọnwụ na SMS.
Spark na-ekwe nkwa a nkwenye zuru ụwa ọnụ ma enwere ike iji mba ụwa mee ihe na ibe ọ bụla nke azụmahịa igwe, gụnyere peeji nke ịkụ nzọ dị n'ịntanetị, ụlọ ọrụ azụmahịa na ATM ebe a na-anabata kaadị MasterCard.
1 Categoriesdị dị iche iche nke kaadị SPARK akwugo ugwo
1.2 Spark OTU
1.3 EBERE PREMIUM
Categoriesdị dị iche iche nke kaadị SPARK akwugo ugwo
E nwere kaadị SPARK dị atọ, nke ọ bụla nwere ọnọdụ.
Nke a bụ kaadị kachasị mkpa. Ọ na-enye ohere otu ụgwọ na njikwa kachasị nke € 250.
Nhọrọ ndọrọ ego ATM adịghị.
Nwere ike ruo 4 Icheku kaadị nke ọ bụla larịị jikọrọ na otu nọmba ekwentị.
Kwesighi ịnye ozi nkeonwe ọ bụla. Naanị ị ga-arụ ọrụ ya, nke na-enye gị ohere ịdebanye data nkeonwe na weebụ na nhọrọ Ọrụ / Debanye aha, wee nwee uru ndị ọzọ, nke ndị a:
Nwee kaadị kachasị na kaadị gị nke ,2.500 XNUMX kwa afọ.
Na-ebuli ihe ruru per 1.000 kwa ụbọchị.
Wepụta ihe ruru € 500 kwa ụbọchị, ruo € 1.000 kwa afọ, na MasterCard ATMs (na Spain naanị).
Jiri kaadị a nwere ike iweghachi ihe ruru € 2.500, otu ugboro n’afọ.
Ga-ezipụ scanned DNI ma ọ bụ NIE, nke kwekọrọ na data nkeonwe edebanyere
Enwere ike iweghachi ya ugboro ole ịchọrọ, na-enweghị gafee oke oke.
Ọ na-enye ohere itinye ihe ruru € 3.000 kwa ụbọchị (ụgwọ 3 nke 1.000 XNUMX).
Can nwere ike ịdọrọ ihe ruru € 500 kwa ụbọchị, n’ihe karịrị nde ATM MasterCard dị na Spain na mba ofesi.
Nwere ike imefu ihe ruru € 5.000 kwa ụbọchị site na itule dịnụ.
Nwere ike ịzụta kaadị SPARK gị www.inweta.se
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » SPARK, kaadị akwụmụgwọ MasterCard adịghị akwụ ụgwọ ụlọ akụ, rutere Spain
Nchịkọta nhọrọ nchịkọta dị mfe ugbu a maka EASYRECRUE
Finanzarel na-esonye na London FinTech Week 2015 na-ekwu maka teknụzụ ego maka ụdị azụmaahịa ọhụụ